Backlinks ။ သင်၏ဆိုက်အတွက်အသုံးဝင်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရရန် Semalt အကြံပေးချက်
ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ backlink တွေရလဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ backlinks နဲ့ link building အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်။ backlinks သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှသင်နှင့်သင်၏ link များဖြစ်သည်။ ထို backlink များသည် Google ၏ algorithm (SEO) ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ စက်ရုပ်များသည်၎င်းကိုအကြံပြုချက်များအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
SERP (သို့) ရှာဖွေမှုရလဒ်များစာမျက်နှာဟာကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုရဲ့ backlinks အရေအတွက်အပေါ်အခြေခံပြီးအင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တခုရှိတဲ့ပင်မစာမျက်နှာဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ ဆိုဒ်များစွာသည် website တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ပါက၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်သည်တန်ဖိုးအလွန်ကြီးရမည်ဖြစ်ရာ၎င်းကိုရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်မြင့်မားစွာထားရမည်ကို Google ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
link တစ်ခုစီကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်“ မဲ” အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ဤမဲ (backlinks) များကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏လူကြိုက်များမှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏လူကြိုက်များမှုကိုတိုင်းတာသည် Larry Page ဒါခေါ်စာမျက်နှာအဆင့်ကိုခေါ်။
၎င်းသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွက် ၀၀ မှ ၁၀ အထိရမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဝင်ဝအဆက်အသွယ်များ၏နံပါတ်နှင့်တန်ဖိုးကိုသာဆုံးဖြတ်သည်။ အစအ ဦး ၌၊ ဂူဂဲလ်သည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ backlink များအရေအတွက်ကိုရေတွက်ခဲ့သည်။ သင် backlinks များများရလေ Google ကသင့်ရဲ့ website ကိုပိုကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် backlink များ၏အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်မှုကို ပို၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအရေအတွက်နည်းသွားသည်။
ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းယနေ့ခေတ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသော 'link building' (backlinks စုဆောင်းခြင်း) နည်းစနစ်များကိုသာအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ဂူးဂဲလ်၏အကဲဖြတ်မှုစနစ်တွင်နာမည်ကောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်လင့်ခ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မလုပ်သင့်သောအချို့သောအရာများစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ backlink တွေကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
အရည်အသွေး backlink ကဘာလဲ? ဒီအတွက်သင်သည်များစွာသောအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
အကယ်၍ သင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိုက်သည်သင်၏နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါကဂူဂဲလ်သည်ထို link သည်ဆီလျှော်မှုမရှိသောကြောင့်သင့်အတွက်အနည်းငယ်သာအကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စွန့် ဦး တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှသတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသည်သက်ဆိုင်ပြီးထပ်တိုးတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဥယျာဉ်မှူး၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်
စာသားအရအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ“ စနစ်တကျစီစဉ်ရန်” ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်
link တစ်ခုကအခြား website တစ်ခုရဲ့ link ကဘာလဲဆိုတာကို Google ကသိချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စာသားအပိုင်းတစ်ခုကယေဘုယျအားဖြင့် domain name တစ်ခုပြောတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ ဥပမာ:
သင် 'ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ' ကိုသင်ရှာဖွေသည့်အခါ Adobe သည် Google တွင်အမြဲတမ်းပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တော်တော်များများသည်“ PDF Reader ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ” ဖြင့်သူတို့၏ pdf downloads များသို့စာသားအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပေါင်းထည့်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်“ ဒီမှာနှိပ်ပါ” ဟူသောစကားလုံးများသည် Adobe site ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Adobe site သည် 'ဒီမှာနှိပ်ပါ' ဟူသောစကားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း Google တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလာသည့် link များအားလုံးသည်တူညီသောကျောက်ချစာသားကိုမသုံးရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏အရေးအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့နှိပ်ခြင်းဖြင့်အစဉ်အဆက်ကောင်းခဲ့သည်။ သို့သော် Google's Penguin ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသည်နှင့်စာသားကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်သင် ဝင်၍ နှိပ်နိုင်သောစာသားများ၏သဘာဝကျသောပရိုဖိုင်းတစ်ခုလည်းလိုချင်သည်။
ခေါင်းစဉ် attribute တစ်ခုအားပုံတစ်ပုံအတွက် alt tag နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် link ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ မောက်စ်ကိုမောက်စ်ပေါ်သို့တင်လိုက်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဤခေါင်းစဉ်သည်အခြေခံစာမျက်နှာ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သကဲ့သို့ထိုစကားလုံးပေါင်းစပ်မှုတွင်သင်ရှာဖွေနိုင်မှုကိုပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဂူဂဲလ်သည်လင့်ခ်ပေါ်ရှိဝက်ဘ်စာမျက်နှာ (ဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်) ၏ဂုဏ်သတင်းကိုလည်းကြည့်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်နာမည်ကောင်းမရသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှစာမျက်နှာတစ်ခုမှ backlink တစ်ခုကိုရရှိပါကမည်သည့်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ:
Twitter.com တွင် PageRank of9ရှိပြီးအလွန်မြင့်မားသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့် (ဤအားကြီးသောဒိုမိန်းအမည်ဖြင့်ကူညီသော်လည်း) PageRank ၄ သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်စာမျက်နှာသည် Twitter ၏ပင်မစာမျက်နှာထက်အားနည်းနေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်မှအပြန်အလှန်လင့်ခ်တစ်ခုသည်ပင်မစာမျက်နှာမှတန်ဖိုးများကိုများစွာလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
သင်၏ backlink များအားလုံးကိုသင်၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ညွှန်ကြားသောအခါသင်၏ပင်မစာမျက်နှာသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုလည်းသင်နားလည်လာပြီဖြစ်သည်။ သင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုရသောအခါဤအရာသည်ကောင်းပါသည်၊ သင်၏ဘလော့ဂ်အသစ်များသည်ပင်မစာမျက်နှာတွင်အမြဲရှိနေပြီးခိုင်မာသည့်ရပ်တည်ချက်ကိုချက်ချင်းရယူသည်။ သို့သော်၊ သင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆောင်းပါးများနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုအထူးဂရုပြုလိုပါက၊ ထိုဆောင်းပါးများအတွက်အသေးစိတ်ကျသောလင့်ခ်များရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်ဘယ်လို backlinks ရသနည်း
backlinks ရရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးအပါဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသည်။ သင့်လျော်သောလင့်ခ်တည်ဆောက်ခြင်းနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်လည်းမတိုက်တွန်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်နေ့စဉ်အချိန်ကာလအားဖြင့် ၁၅ နာရီမှနာရီဝက်ခန့်အချိန်ကုန်ခံနေလျှင်အချိတ်အဆက်များတည်ဆောက်ခြင်းသည်ရေရှည်တွင်ကြီးမားစွာကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် Google ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အရာသည်သဘာဝကျသည်။
သင်၏ "link building" ကိုစတင်ရန်သင်စတင်စာမျက်နှာအချို့တွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ ယနေ့ဒီနည်းဗျူဟာသည်ယခင်ကထက်အားနည်းနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပင်မစာမျက်နှာသည် link တစ်ခုစီအတွက်တန်ဖိုးနည်းသောကြောင့်စာမျက်နှာပေါ်တွင် link များများလေလေ၊ အချို့ home page များသည်အလွန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အကြောင်းအရာနှင့်အနီးဆုံးရှိသောအစစာမျက်နှာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဆက်စပ်မှုကိုဂရုပြုပါ။
Google ကိုသွားရန်နှင့် startpagina.nl, startgids.nl, Snelstarten.nl, Handystarten.nl, Startkabel.nl၊ အခြားအလားတူစာမျက်နှာများစသည့်စာမျက်နှာများကိုစတင်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်စတင်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာများနှင့်မည်သည့်စာမျက်နှာခွဲကိုသင်အကောင်းဆုံးမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက "add link" ခလုတ်ကိုရှာပါသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်တုန့်ပြန်မှုမရလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏ link ကိုတင်မထားပါကမထိတ်လန့်ပါနှင့်။ များသောအားဖြင့်ထိုသို့ဖြစ်သည်; သင်၏ link ကိုတင်ထားသူအနည်းငယ်ကိုသင်မှီခိုရမည်။
backlinks ရရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာဆောင်းပါးရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးစျေးကွက်ဆိုသည်မှာသင်၏ဆောင်းပါးများကိုတတ်နိုင်သမျှအင်တာနက်ပေါ်တွင်တတ်နိုင်သမျှအင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလင့်ခ်တည်ဆောက်ခြင်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးများမှတစ်ဆင့်သင်၏ each ည့်သည်များသည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စီအောက်ရှိသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လင့်ခ်ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စာသားထဲတွင်စကားလုံးအနည်းငယ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်လာရောက်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည် visitors ည့်သည်များအတွက်အပိုချန်နယ်တစ်ခုရှိသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏နောက်ကျောလင့်ခ်များတွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ဆောင်းပါးများကိုနေရာချနိုင်သောနေရာများစွာရှိသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Artikelplaats.nl ဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင်အမည်၊ ပြီးခဲ့သည့်အတိုင်းဆောင်းပါးများကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါ။ အခြားဆောင်းပါးနေရာကိုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းဆောင်းပါးများကိုသိမ်းဆည်းပြီး၎င်းတို့တွင်အကြောင်းအရာရှားပါးမှုရှိပါက၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်။ သူတို့ကသင်တန်းသင့်ရဲ့ link ကိုကျော်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်ဤ link link method ကိုအလွန်အမင်းအသုံးမပြုရန်သေချာစေပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင်၏ backlink ပရိုဖိုင်းကို (အစောပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း) သဘာဝမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
blog ည့်သည် Blogging
တတိယရွေးစရာကတော့တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ blog ည့်သည်ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပါ။ သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများသည်သူတို့ဘလော့ဂ်များကိုဖြည့်စွက်ရန်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုပေးသောစာရေးဆရာများလိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်စည်းကမ်းသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏ဘလော့ဂ်မှတဆင့်အသစ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်စာရေးသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သတင်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည်။
နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Twitter နှင့်သင်ကဲ့သို့ခေါင်းစဉ်တူအကြောင်းအရာများကိုဘလော့ဂ်ပြုလုပ်သူများရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ Retweet နှင့်ဤပုဂ္ဂိုလ်ထံမှတွစ်တာအကြိုက်ဆုံးနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏စိတ်အေးလက်အေးသေံအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်၏အမည်ကိုတွေ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်ရန်အီးမေးလ်ဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမကိုဆက်သွယ်ပါ။
guest ည့်ဘလော့ဂ်များသည် link များအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအလွဲသုံးစားပြုခြင်းခံရသောကြောင့်ဂူးဂဲလ်သည် guest ည့်ဘလော့ဂ်များမှစုဆောင်းထားသည့်လင့်ခ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် ပို၍ သံသယဖြစ်လာသည်။
လူမှုမီဒီယာမှ link များ
Search Machine Optimization နှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပိုမိုကြည့်ရှုမည်ဟု Google ကလွန်ခဲ့သောအချိန်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှလင့်များသည် ပိုမို၍ သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည် link အရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ဂူးဂဲလ်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာလင့်များအားလုံးကိုပေါင်းထည့်ပြီးသင်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှလင့်များမည်မျှပုံမှန်ရရှိသည်ကိုလည်းကြည့်သည်။ ရုတ်တရက်အမြောက်အမြားရယူခြင်းသည်သင့်အားရေရှည်အတွက်အထောက်အကူပြုမည်မဟုတ်သော်လည်းဘလော့ဂ်တစ်ခုချင်းစီတွင် tweets များ၊
ဘုံမေးခွန်းတစ်ခုမှာသင်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်သင့်သလားဆိုသည်မှာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များက ၄ င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စွမ်းအားကိုအားနည်းစေလိမ့်မည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကအမှုမဟုတ်ပါ ... သို့သော်; သင်ရေးသားသည့်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသာချိတ်ဆက်ပြီးသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိအထွက် link များသည်လည်းအရည်အသွေးရှိကြောင်းသေချာစေပါ။ သင် site ည့်သည်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပြင်ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များပါသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ရည်ညွှန်းသောအခါဂူဂဲလ်က၎င်းကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဂူဂဲလ်၏နာမည်ကောင်းရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
Link လဲလှယ်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းစွာဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအခြား website သို့ link တစ်ခုယူဆောင်လာပြီးပြန်လာသည့်အခါတွင်ထို website သည်သင်၏ website သို့ link တစ်ခုထားပေးသည်။ ၎င်းသည်ယခင်က (ဝေးကွာသော) အတိတ်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယခုလူတိုင်းကလင့်များကိုဤနည်းအတိုင်းလဲလှယ်နိုင်သောကြောင့်ဂူဂဲလ်မှမည်သည့်တန်ဖိုးမျှမရသေးပါ။
"link partners" စာမျက်နှာမှအခြား link ၁၀၀ ရှိသော backlink သည်သင့်အတွက်တန်ဖိုးမရှိပါ။ စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်အထွက်ချိတ်ဆက်များများများလေလေဂူဂဲလ်၏တန်ဖိုးထားမှုတွင်ထို link တစ်ခုစီသည်တန်ဖိုးနည်းလေလေဖြစ်သည်။
အခြားပင်မစာမျက်နှာရှိလင့်ခ်တစ်ခုကအားလုံးကိုပြောပြသည်။ link လဲလှယ်ခြင်းဖြင့်သင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖြည့်စွက်ကြောင်းသေချာစေရန်ဂူဂဲလ်သည်ပြaနာမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်လင့်ခ်များကိုဖလှယ်လိုပါကဝက် (ဘ်) ဆိုဒ် (၃) ခု၊ A၊ B နှင့် C. တို့ဖြင့်အလုပ်လုပ်သော ABC linking ကိုသွားခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။
သင့်တွင်ဝက် (ဘ်) ဆိုဒ် ၂ ခု (A နှင့် C) ရှိသည်ဆိုပါစို့။ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက် (ခ) မှသင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုပါက B သည် backlink ရှိလိုသည်။ ထို့နောက်သင်၏ဒုတိယ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် (C) မှ B သို့လင့်ခ်ကို B ပြန်မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက် (A) သို့လဲလှယ်ရန်ပြန်လာသည့် link တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက် A နှင့် C အကြားနောက်ထပ်ဆက်နွှယ်မှုမရှိနိုင်ပါ။ ဤနည်းဗျူဟာသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။
သင်၏ backlinks များကို backlink checker ကောင်းတစ်ခုဖြင့်အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင့်တွင်အဆင့်မြင့်သော်လည်းအလွန်လွယ်ကူသောကိရိယာများရှိသည်။ ကိရိယာအားလုံးနီးပါးသည်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုပေးသည်။ စစ်ဆေးသူတိုင်းနှင့်သင့်အားလင့်ခ်များအားလုံးကိုမည်သူပေးပို့ကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးသင်ထင်မြင်နိုင်သည်။ backlinks checkers များမှတဆင့်သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ backlinks များကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်ပြီးသူတို့၏ link များမည်သည့်နေရာမှရရှိသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။
Internal link များနှင့် backlink များအကြားခြားနားချက် - internal links သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအခြား website သို့ညွှန်ပြသော link များဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလင့်ခ်တွေဟာမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးနည်းတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏ဂူဂဲလ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ဓမ္မဓိivity္ဌာန်ကျမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိပါ၊ သင်၏အတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်မှုများသည် backlinks များနှင့်တူညီသောတန်ဖိုးကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ပြည်တွင်းရေးလင့်များထောက်ခံချက်တစ်မျိုးကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။
စာမျက်နှာ A မှစာမျက်နှာ B သို့သွားသောအခါစာမျက်နှာ A ကစာမျက်နှာ B. အားအမှန်တကယ်ထောက်ခံချက်ပေးသည်။ ကျောက်ဆူးစာသားသည်အတွင်းပိုင်းလင့်များအတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ပထမစာမျက်နှာတွင်သော့ချက်စာလုံးအချို့ကိုဂူးဂဲလ်၏ပထမနေရာ၌ရမှတ်မရရှိသလား။ ထို့နောက်သင်ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုအတွင်းအချိန်ကာလတစ်ခုအထိတင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ထိုအခါသော့ချက်စာလုံးပေါင်းစပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီဟာကသင်၏ဂူဂဲလ်အဆင့်ကိုလွှမ်းမိုးမှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ငါတို့အကြံဥာဏ်တွေကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ, ဤနည်းလမ်းများထိရောက်သောဖြစ်ကြပြီးငါတို့သည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်လုပ်နေတယ် link ကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှကောင်းတစ် ဦး အပြင်။
သင်သတိပြုမိသောအချက်မှာဤနည်းလမ်းများသည် backlinks များသာမကချက်ချင်းအပိုဖောက်သည်များထုတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပိုလင့်ခ်များကိုရယူခြင်းသည်သင့်အားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်ပိုမိုစွမ်းအားနှင့်မြင်သာမှုပိုမိုရရှိစေသည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒေသတွင်းချိတ်ဆက်မှုများရယူရန်သင်တွင်မေးခွန်းများရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်သင်ဤကုမ္ပဏီကိုသင်၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီအတွက်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီပျော်ရွှင်ကြသည်။